iPhone 5 | Vaovao IPhone
El iPhone 5 Io no taranaka fahenina an'ny iPhones, na eo aza ny anarany. Natomboka tamin'ny 21 septambra 2012 ary hitantsika indray ny fanovana endrika, amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny tapany aoriana manambatra aluminium anodized sy vera. Tsara homarihina izany Efijery 4 inch malalaka toy ny teo aloha fa lava kokoa. Ny fakan-tsariny dia misy 8 Megapixel ary ny fakan-tsary voalohany dia 1,2 Megapixels; Izy io dia manana RAM 1024 MB sy processeur dual-core 1,3 GHz. Misy amin'ny fotsy sy volafotsy na mainty sy mainty volondavenona misy 16, 32 ary 64GB. Navoaka ihany koa ny endriny volana vitsivitsy talohan'ny nanombohany.
Vaovao farany ny iPhone 5 alohan'ny hijanonany amin'ny 3 Novambra
Ny iPhone 5, ilay maodely miaraka amin'ny Apple dia naka ny efijery 4-inch, dia nijanona tsy nisy fanavaozana tamin'ny iOS 10, ...
Apple manitatra fandaharana fanoloana bateria iPhone 5 amin'ny alàlan'ny 2016
Ny iPhone 5 dia manana programa fanoloana mihetsika roa. Ny iray amin'izy ireo dia ny fanoloana ny bokotra hidy sy ...
Ny programa fanoloana bateria ao amin'ny iPhone 5 izao dia manaiky fantsona misy efijery manaraka
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampitandrina anao izahay fa nanomboka programa fanoloana bateria ho an'ny singa iPhone sasany i Apple ...
Apple dia manomboka programa fanoloana bateria amin'ny iPhone 5 sasany
Ny mpampiasa sasany manana iPhone 5 dia miaina fahaleovan-tena mahantra amin'ny terminal, indrindra raha ampitahaintsika amin'ny ...
Naoty fanampiny ho an'ny iPhone 5 misy olan'ny bokotra Power
ny Cristina Torres sary placeholder hace 7 taona .
Ianao angamba efa nahita tao amin'ny iray amin'ireo bilaogy maro izay namoaka ny fanamarihana ofisialy avy amin'ny Apple izay mpampiasa ...
Apple dia hisolo ny bokotra herinaratra amin'ny iPhone 5 anao raha tsy niasa intsony izy io
Tapitra mandeha tsara ve ny bokotra on / off anao amin'ny iPhone 5? Aza matahotra, satria tsy ianao no ...
Ny iray amin'ireo olana izay afaka omen'ny iPhone antsika aretin'andoha indrindra dia ny fonony. Raha tsy ...
ny Luis del Barco hace 8 taona .
Ny iPhone 5s dia tena tsara toa ny iPhone 5, satria samy mizara ilay endrika tsy mampino - iray ...
Ny sary tsara indrindra ho an'ny iPhone 4, 4s, 5, 5c ary 5s
Amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny fitaovantsika amin'ny iOS 7 dia afaka nanamarina izahay fa mitovy amin'ny fananana iPhone vaovao tanteraka: ny ...
ny Pablo Ortega hace 8 taona .
Ny iPhone 5s miloko volamena dia efa lasa tombony ho an'ireo mpankafy Apple ao ...
Minitra vitsy lasa izay dia navoakako tao amin'ny Actualidad iPhone ny famerenana an-tsary sy ny famakafakana ireo iPhone 5s ary tao no nanaovako ...